Rakibida La Kumeysan Karo Gawaarida & Qaadista Alaab-qeybiyeyaasha Mashiinka Quudiya iyo Warshad | YiZheng
Ku Raritaanka & Mashiinka Quudinta waxaa loo isticmaalaa sida alaabta ceeriin inta lagu jiro qalabka la shaqeynayo waxayna ku habboon tahay qalabka gawaarida gawaarida forklift. Isku-joogga iyo sii-deynta joogtada ah maaha oo keliya keydinta kharashka shaqada, laakiin sidoo kale hagaajinta waxtarka shaqada.
Waa maxay Mashiinka Rarista & Quudinta?
Isticmaalka Raritaanka & Mashiinka Quudinta sidii bakhaarka alaabta ceeriin ee geeddi-socodka wax soo saarka iyo bacriminta bacriminta. Sidoo kale waa nooc ka mid ah qalabka gudbinta ee loogu talagalay qalabka waaweyn. Qalabkani ma soo gudbin karo oo keliya qalabka wanaagsan ee cabbirka wax ka yar 5mm, laakiin sidoo kale maaddooyinka waaweyn ee ka badan 1cm. Waxay leedahay la qabsi xoog leh iyo awood gaarsiinta la hagaajin karo iyo gaarsiinta lebiska joogtada ah ee qalabka kala duwan. Qalabka waxaa lagu qalabeeyaa shabaqa ka hortagga burburka, qalabka ka hortagga xannibaadda gariirka, qalabka xawaaraha beddelka xawaaraha, wuxuu gaari karaa dheecaan isku mid ah iyo xakamaynta saxda ah ee mugga dheecaanka.
Muxuu yahay mishiinka rarka & quudinta?
Sida hal geeddi-socod, Raritaanka & Mashiinka Quudinta waxaa loo isticmaalaa in lagu raro walxaha ka soo baxa forklift. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa gudbinta budada, granule ama alaabada yar yar, badanaa waxaa loo isticmaali karaa mashiinka kale. Waxay gaari kartaa isku mid ahaanta iyo sii deynta joogtada ah si loo badbaadiyo shaqada iyo hagaajinta waxtarka shaqada ee khadka wax soo saarka bacriminta.
1. Saxanka xariggu wuxuu qaataa saxanka laba geesoodka ah si uu si wax ku ool ah uga hortago daadashada.
2. Silsiladda jarjarku waxay qaadataa qaab dhismeed kaas oo xamuulka qaadaya iyo kala-goynta lagu kala saarayo, taas oo hagaajinaysa awoodda quudinta saxanka si ay ugu adkeysato culeyska saameynta.
3. Qalabka jilciya dabada waxaa la siiyaa guga maqalka, kaas oo yareyn kara culeyska saameynta silsiladda tartiib-tartiib ah iyo hagaajinta nolosha adeegga silsiladda.
4. Feedhadhka saxanka silsiladda ka kooban wuxuu ka kooban yahay shan qaybood: aaladda wadista madaxa, aaladda giraangirta dabada, aaladda isdabamarinta, saxanka silsiladda iyo jir.
5. Dabada ayaa leh birqado naxdin leh oo loogu talagalay kuwa wax ku dhuujiya shoogga, dhexda-na waxay leedahay taageero rullaluisteeda wax lagu dhuuqo oo gaar ah si loo hagaajiyo baloogga weyn. Maaddada waxaa saameyn ku leh saameynta rollers-ka iyo taarikada jeexjeexan ee labada dhinac si loo hagaajiyo nolosha qaybaha socda.
Raritaanka & Mashiinka Quudinta wuxuu ka kooban yahay nidaam miisaan, silsilad farsamo gudbineed oo silsilad ah, silo iyo jir; oo ay ku dhex jiraan saxanka silsiladda, silsiladda, pin-ka, rullaluistemadka iyo wixii la mid ah ee habka gudbinta ay u xiran yihiin qaybo leh xoogag iyo mowjaddo kala duwan. Xirashada iyo jeexjeexa ugu horreeya wuxuu u baahan yahay dayactir joogto ah iyo beddelaad; silsiladda saxanka wax ku quudiya ayaa leh adkaansho sare waxayna la qabsan kartaa qayb weyn oo maado leh granularity cayiman. Mugga goosadku waa weyn yahay, kaas oo si wax ku ool ah u gaabin kara waqtiga quudinta forklift, laakiin isla markaa xawaaraha gudbinta saxanka silsiladdu waa mid gaabis ah, oo leh awood weyn.
Loading & Quudinta Mashiinka Muuqaalka Video
Xulashada Moodalka Mashiinka Mashiinka & Quudinta
Awood (t / h)
Awooda isku qasida: 2.2kw
Awooda gariirka: (0.37kw
Awoodda wax soo saarka: 4kw beddelidda soo noqnoqoshada
3-10t / saacaddii
Awooda gariirka: 0.37kw
10-20t / saacaddii
Hore: Mashiinka Mashiinka Quudinta ee Vertical Disc
Xiga: Mashiinka Baako otomaatiga ah